Ezemidlalo kunye nomqondiso wakho weZodiac - Khetha Uphawu
Ezemidlalo kunye nomqondiso wakho weZodiac
Umoya wokhuphiswano kunye nendalo evuthayo ye Aries kufuneka izivuseleli. Ezona midlalo zibalaseleyo kubo zezo zidinga ubukroti, ingqwalasela kunye nokomelela, kunye nolona khetho lwabo lungcono bububuchule bokulwa, umdlalo wamanqindi kunye nokubaleka. Xa baba lilungu leqela, banenkathazo yokudibanisa, ngaphandle kokuba banendlela yokuba ndlongondlongo ngokwenene kunye nomzimba kunye nabachasi babo. Oku, ngaphandle kwamathandabuzo, sisizathu sokukhetha ibhola ekhatywayo yaseMelika okanye umbhoxo kuneminye imidlalo yeqela.
Eyona suti inamandla kuyo nayiphi na Taurus ngamandla nonyamezelo lwabo. Oku kubenza bagqwese kwimidlalo yeqela efuna ukuhamba rhoqo kunye nokunxibelelana nomhlaba, njengebhola ekhatywayo. I-Iertia ebagcina ekuqeqesheni xa bezinikele kwimidlalo yenza ukuba balungele ukuphakamisa ubunzima okanye ukwakhiwa komzimba, kunye naluphi na uqeqesho olunzima oluvumela ukuba badle nantoni na abayifunayo, xa befuna.
Eyona nto ibalulekileyo a Gemini kukusebenzisa izandla zabo nawuphi na umdlalo abawukhethayo. Zilula, zikhawuleza kwaye ziguquguqukayo, zinamandla amakhulu okuba yinxalenye yeqela, ngelixa kwangaxeshanye zikwazi ngokupheleleyo ukusebenza kwelinye. Umdlalo ogqibeleleyo kubo yibhola yevoli okanye ukubheqa ukuba bayathanda ukudibana endleleni, okanye into enesidima njengentenetya kumlo omnye okanye kabini.
Uphawu lwe Umhlaza luphawu apho Mars ukuwa kwaye oku akuhambi kakuhle nemidlalo ngokubanzi. Ukuba banamandla kwaye bazithembile, bekulungele ukwalathisa amandla abo kwicala elinempilo, banokuziva behamba ngesikhephe okanye ukusefa emoyeni kwaye bayathanda ukuqaqamba kumdyarho ngokubanzi. Ukuzisa uxolo ebomini babo kunye nokudibanisa umsebenzi wokuphumla womzimba kunye neendlela zokuphefumla, i-yoga yinto ekufuneka besoloko bezibophelela kuyo.
Ukwimo entle kunye nentando eyomeleleyo, Leos banokuphumelela kuwo nawuphi na umdlalo abafuna ukuwufunda. Olona khetho lubalaseleyo kubo yimidlalo ethandwayo ephethe umfanekiso othile kunye nabo kwaye ibenze bazive beyinxalenye yento enkulu kunye nebalulekileyo. Ukuba bakhetha ukuthembela ekusebenzeni kweqela, kuya kuba nenjongo yokubaxhasa kwindlela yabo yobuqu eya ebungangamsheni. Kufuneka bathathele ingqalelo i-basketball, igalufa kunye ne-snowboarding.
Uphawu lwe Virgo luphawu lwesiqhelo kwaye abameli bayo bahlala bebona imidlalo njengendlela yokuphila ubomi obunempilo. Yiyo loo nto befumana uhambo olukhawulezayo lokuzonwabisa luhlaziya kwaye luvuselela, ngakumbi xa lusenziwa yonke imihla. Xa bethatha isigqibo sokuzibophelela kwezemidlalo, baqhuba kakuhle kwiqakamba okanye kwibhola yesandla, kwaye banokufumana ulwaneliseko olukhulu kumsebenzi onzima onjengomdyarho werelay.
Iponti ayiqondi Mars kakuhle kakhulu, kunye nayo ukubaluleka kwezemidlalo ebomini babo. Ukudibanisa ubume babo obusulungekileyo kunye nomsebenzi, benza kakuhle kakhulu kumdlalo ohloniphekileyo ofana nokubiyela, okanye uhle njenge-ice skating, i-gymnastics okanye i-ballet. Isidingo sokufumana ibhalansi sibenza bahle kakhulu ekuhambeni ngentambo, ngakumbi xa benendawo enyukayo okanye iiplanethi ezininzi kuphawu lweScorpio.
Nangona I-Scorpio Indalo ayibonakali ngathi inomlilo kwaye iyadlala, ifuna imiceli mngeni egqithisileyo yomzimba kunye nomdaniso wokufa ngokwawo. Eyona misebenzi ilungileyo kubo kukunyuka, ukugoba okanye ukukhwela intaba, kwiindawo apho banokunxibelelana ngokwenyani nendalo. Kwezinye iimeko, i-skydiving ijika ibe yeyona nto iyonwabisayo kakhulu, kodwa ingaBamanzi kwaye kunokuba ihle kakhulu.
Sagittarius luphawu lwabo bonke abadubuli ababukhali, abantu abakwaziyo ukubetha ithagethi ukusuka kumgama omde, kwaye bayagqwesa ekutoleni. Sekunjalo, bafumana uvuyo olukhulu kwimidlalo yamaqela, ngakumbi xa bengaqhelekanga kwilizwe abahlala kulo. Unxulumano lwabo namahashe lomelele kakhulu kwaye ipolo yinto yokuqwalasela umsebenzi wexesha elide, kunye nokukhwela amahashe.
Kukho into ezinikele kakhulu kwi-a Capricorn loo nto ibangela ukuba babe ngabakrelekrele kuyo nantoni na. Iitalente zabo zilele kunyamezelo kunye nokuqonda ngokomzimba, kunye nesidingo sabo sokwaphula imida kunye nokuziva iintlungu. Bangadlala ibaseball, hokey, chess okanye babaleke umdyarho ngentshiseko efanayo engakholelekiyo okoko benenjongo ephezulu abanqwenela ukuyifeza. Njengoko bekhula, i-spasm eyakha emzimbeni wabo ibenza babe ngumgqatswa wokuqala we-yoga.
Ukukhwela ibhayisekile ngowona msebenzi ubalaseleyo wemihla ngemihla Aquarius . Baya kuba nomdla kwimidlalo eyingozi kakhulu, bebabukele bencoma kumabonwakude, kodwa bahlala besoyika ngenxa yezigqibo ezininzi ezinesibindi ezenziwa ngabanye abantu. Amandla abo afanele afakwe ekoyiseni uloyiko, kuba banokugqwesa kwinto efana neparagliding okanye ukutsiba ngeparashute. Baya kuthanda ukulawula umoya baze bafumane uxolo ekuthuleni okubangqongileyo ngelixa bekude emoyeni.
A IiPisces ummeli uya kuhlala ethanda umsebenzi obandakanya amanzi, ngaphandle kwakwiimeko xa beyoyika ngenxa yesizathu esithile esinxulumene nobuntwana. Olona khetho lubalaseleyo lwezemidlalo kubo kukubhukuda kunye nokuntywila, okubavumela ukuba bave uxolo lokuthula ngaphantsi komhlaba. Kwimeko apho banqwenela ukwenza mbuna isilwanyana ngaphakathi, banokukhetha ukukhwela ihashe, kodwa kuphela ukuba abaziva bexhathisa ekuthinteleni kunye nenqanaba lolawulo abaya kuba nalo kwisilwanyana.
Khetha Uphawu Virgo Leo Khetha Uphawu Aries